အမျိုးကောင်းသမီးများသို့ (သို့ မဟုတ်) အနာဂတ်၏မိခင်လောင်းလျာများသို့| Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » အမျိုးကောင်းသမီးများသို့ (သို့ မဟုတ်) အနာဂတ်၏မိခင်လောင်းလျာများသို့ 
အမျိုးကောင်းသမီးများသို့ (သို့ မဟုတ်) အနာဂတ်၏မိခင်လောင်းလျာများသို့ 
Posted by အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ/ သန်းထွဋ်ဦး on Sep 16, 2011 in Cultures, Gossip, Rumor | 22 comments
(၅)ဆံပင် နက်မှောင် ရှည်လျားကောင်းမွန်ခြင်းရှိ၏။
(၆)လည်ပင်းတွင် အရေးအရစ် သုံးခုရှိ၏။
(၁၂)မကောင်းမှုကိုရှောင်ကြဉ်၍ ကောင်းမှုကို ပြုတတ်၏။
(၁၄)ကြောက်ရွံ့ လေးစားထိုက်သူကို ကြောက်ရွံ့ ၏။
(၁၆)ပဒုမ္မာကြာကဲ့သို့ ကိုယ်နံ့ ရှိ၏။
(၁၈)မာတင်္ဂ ကဲ့သို့ ကြည့်ခြင်းမျိုးရှိ၏။
(၁၉)ကိုယ်သည် ချမ်းသောအခါနွေး၍ ပူသောအခါအေး၏။
(၅)မိဘ ဆရာသမားတို့ အားရိုသေလေးစားတတ်၏။
(၆)ကြာညိုနံ့ ကဲ့သို့ ကိုယ်နံ့ရှိ၏။
(၂)ပျားအနံ့ ကဲ့သို့ ကိုယ်နံ့ ရှိ၏။
(၃)သားမြတ်သည် သလဲသီးနှင့် တူ၏။
(၇)အမွှေးအကြိုင် ပန်းနံ့ သာမက်မော၏။
(၁၀)ယောကျာ်းနှင့် ခဏမျှသာကင်းကွာ နေလိုစိတ်မရှိခြင်းဖြစ်၏။
(၁၁)ရသေ့ရဟန်း ကိုမြင်လျှင်ပင် မက်မော၏။
(၄)မျက်စိသည် လောက်စာလုံးကဲ့သို့ ဝိုင်း၏။
(၁၂)ဆင်မုန်နံ့ ကဲ့သို့ ကိုယ်နံ့ ရှိ၏။
မြန်မာမိန်းကလေးတို့ သည် မိန်းမကောင်း၊မိန်းမမြတ်ဂုဏ်ရည်နှင့်ပြည့်ဝသော မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်စေရန်ပဒုမ္မနီမိန်းမ အမျိုးအစားနှင့် စိတ္တရနီ မိန်းမအမျိုးအစားတွင် ပါဝင်စေရန် မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းအပ်ပါသည်။
စောင့်မျှော်နေသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မနက်မိုးလင်းထဲ ကပျက်လိုက်တဲ့ မီးက ခုမှလာတော့ ခုမှတင်ပေးဖြစ်တာတောင်းပန်ပါတယ်။အားလုံးရဲ့ အမြင်လေးတွေနဲ့ ဝင်ပြီးမန့် ပေးကြပါဦးနော်။ကျေးဇူး ဥပကာရအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။အနာဂတ်ရဲ့ မိခင်လောင်းလျာများဆိုလို့ ရွာထဲမှ အပျိုကြီးများ စိတ်မကောင်းမဖြစ်ကြပါနဲ့ နော်။
နှာခေါင်းပြားတဲ့မိန်းမတွေကအညံ့စားထဲပါကုန်ပြီပေါ့ အဲဒါဆိုတရုတ်မတွေ တော့ ဒုက္ခပဲ…Lone ကတော့ နှာ
ခေါင်းမပြားဘူး..လည်ပင်းမှာလည်း အရစ်ပါတယ်…ဟိဟိ…ကိုယ်နံ့ချိုလား ငန်လားတော့မသိဘူး…
ရေချိုးပြီးရင်တော့ ဆပ်ပြာနံ့ရတယ်။ အလုပ်သွားခါနီးဆိုရင်တော့ရေမွှေးနံ့ နဲ့ lotion နံ့…အကောင်းတွေ
ချည်းပဲရွေးပြောမှမကောင်းတာတွေတော့မပြောတော့ဘူးနော်………….ဟဲဟဲ…….:P …. ဒါပေမယ့် စဉ်းစားကြည့်ရင် အခုခေတ်မှာ အားလုံးက ရောနှော
နေပြီ …. အရင် ဘုရင်တွေ ခေတ်လောက်ကပဲ …အဲဒီလိုမျိုးရှိမယ်ထင်တယ်နော်….
အယ် အဲလိုမဟုတ်ရပါဘူး။ရှိတာပေါ့။တရုတ်ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ဗမာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ဘယ်လူမျိုးမှာဘဲ ဖြစ်ပါစေ ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိလေးတွေရှိပါသေးတယ်ရှင်။
ဒါပေမယ့် …အခုခေတ်မှာ အမြတ်စားမိန်းမဆီက အချက်နဲနဲ.. အကောင်းစားမိန်းမဆီက အချက်နဲနဲ… အလတ်စားမိန်းမဆီက အချက်နဲနဲ အညံ့စားမိန်းမဆီက အချက်နဲနဲ … အားလုံးရောထွေးနေတတ်တာကို ပြောတာပါ။… အမြတ်စားမိန်းမဆိုပြီး ….အမြတ်စားမိန်းမရဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့မိန်းမဆိုတာလုံးဝရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး …ကျိန်းသေတယ်…. ရှေးအရင်က ရှိခဲ့ရင်တောင် ၁၀၀ မှာ အများဆုံး ၅ယောက်လောက်ပဲ ရှိမှာ…မိန်းမကိုယ်ကနေ မကောင်းတဲ့အနံ့တစ်ခုကတော့ မိန်းမတိုင်းထွက်ဖူးမှာပါပဲ…ဘယ်သူမှရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ အနံ့ …. မိန်းမတိုင်းမိန်းမတိုင်းပါ……
ကြာညိုနံ့သင်းတဲ့အမျိုးသမီးကဘယ်လောက်များ သင်းနိုင်မှာလဲ….ရွာသားများ ဖတ်မိရင်လည်း ….နားလည်ပေးကြပါ…ပြောရင်းနဲ့ရှက်လာပြီ…တော်ပြီ မပြောတော့ဘူး
ဒီခေတ်ထဲမှာ အပေါ်ဆုံးနှစ်မျိုးရဖို့ ဆိုတာ တော်တော်မလွယ်ပါလားနော်…
ဆန်ကွဲထဲက ဆန်ကောင်းရွေးရတဲ့ အခြေအနေမျိုး…
စိတ္တရနီမိန်းမမျိုးရရင်ပဲ ကျေနပ်ပါပီး)
ကိုယ်အရသာ ချုိုလား မချိုလား ဘယ်လိုစမ်းရမလဲ.. မမီး၂သော်ရေ..
ဟယ် ညစ်ပတ်လာကြပီ။မီး မသိပါဘူး။ဖတ်မိတာလေး ပြန်ဝေမျှတာပါ။
.. မမီး မသိလို့ မရဘူးလေ..ကိုယ် ရေးထားတဲ့စာကိုတော့ စာဖတ်သူတွေ
နားရှင်းအောင် ပြန်ရှင်းပြသင့်ပါတယ်… ညစ်ပတ်တာမဟုတ်ပါ…
လက္ခဏာထဲမှာပါတဲ့ … ကိုယ်ချိုတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုစမ်းရတာလဲခင်ညာ..
ဆီးချို တိုင်းတဲ့ စက်နဲ့ တိုင်းလို့ရလား.. ဟီးးး.. မသိလို့ပါ.နော့..
အပေါ်က ကိုရင်စည်သူ မန့် သလို ပဲ
ချိုလား မချိုလား ဘယ်လို စမ်းရမလဲ
နောက်ပြီး သိချင်တာ ရှိသေးတယ်
အဲဒါ ဘယ်လို စမ်းရမှာလဲ …
ဒီဆိုက်ထဲ က နဲ့ ဒီဆိုက်ကို လာဖတ်သူတွေ လဲ
အင်း…မမီးမီးသော်…ဒီရွာကလူတွေအကြောင်း သိပ်ပြီးမလေ့လာမိသေးဘူးထင်တယ်…ဒီရွာမှာသူကြီးကအစ လက်တွေ့သမားဗျ…သေသေချာချာစမ်းသပ်လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်ပြတာတောင် ဓါတ်ခွဲခန်းထဲဝင်ပြီးဓါတ်ခွဲကြည့်အုံးမှာ..
စာအုပ်ထဲကတွေ့ပါတယ်ဆိုရင်တော့…သူကြီးက နိုး..နိုး…အိုင် ဒုံ့ ဘီလိဖ်(ဖ်)…
ဂေဇက်သားတွေ တင်ရမဲ့ ပို့ ကို ဂေဇက်သူ က တင်လိုက် မိသကိုး။
မီးမီးသော်ရေ ကျားကျမ်း ရှာ ဖတ်ပြီး ပြောင်းတင်ပေတော့။
စာတွေပေတွေနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းလို့တော့ မရပါဘူး .. ဟိုခေတ်က မိန်းမတွေ ကြာညိုနံ့ သင်းတာတို့ .. ဟသာင်္လို အသံရှိတာတို့က ဒီခေတ်မှာ ဘယ်လိုမှ ရှာမရတော့ဘူး … ။
အဓိကက စိတ်ကောင်းရှိတတ်ဖို့ .. ကိုယ်ချင်းစာတတ်ဖို့ ….. နားလည်လက်ခံ ဆုံးမလွယ်ဖို့နဲ့ … အကောင်းမြင်ဝါဒရှိဖို့နဲ့ အပျင်းမထူ ၊ ဇီဆာ မကြောင်တတ်လျှင်ပဲ .. ကောင်းတဲ့အမျိုးစားထဲ ထည့်တွက်လို့ရနေပြီလေ .. ။
မိန်းမတစ်မျိုးတည်းတင်မဟုတ်ဘူး ..ယောကျာ်းတွေရော … လူသားအားလုံးအဲ့ဒီလို ဖြစ်သင့်တာ ..
ခုခေတ်လဲ ကြာညိုနံ့တွေ ကြာနီနံ့တွေ ရပါတယ် … အလှကုန်ပစ္စည်းတွေ ကြောင့်ပါ…
ရေမွှေးတွေ ခေါလျှော်ရည် နံ့တွေ နဲ့မို့…
အမလေး မမအိတုံကယ်ပေလို့ သာ။မီးက အားလုံးသိရအောင်တင်ပေးလိုက်တာ။ကြောက်စရာကြီးပါလား။သူကြီး စစ်ကူတောင်းရအောင်လဲသူလဲ ပျောက်နေပီ။
ဒီမိန်မကတော့ လမျက်နှာနဲ့ ရုပ်တော်တော်ဆိုးမှာပါ ကြီးတဲ့ဟာတွေအရမ်းကြီးနေရင်ကြည့်ကောင်းမယ်မထင်ဘူး
ဟင်္သာလိုသွားရင် တော့ ပြီးရောပဲ လည်တယ်လည်တယ်နေမှာ
ကြာနံ့သင်းတယ်ဆိုတော့ မျက်စိမမြင်တဲ့ လူဆိုရေကန်နားရောက်နေတယ်ထင်မှာ
အရသာချိုရင်တော့ ပုရွက်ဆိပ်ညဘက် အကိုက်ခံရနိုင်ပါတယ် …။။
ချမ်းရင်နွေးပြီး ပူရင်အေးတယ်ဆိုတဲ့ တစ်ချက်ထဲနဲ့ စဉ်းစားပြီးလက်ခံလို့ရတယ်
နေ့တိုင်း အတွယ်ခံရမှာပဲ..(အလုပ်မပြီးလို့ယောက်ျားရိုက်မှာပြောတာပါ )။။။။
နံပါတ်ကိုး ကတော့ ကြီးရမယ့်နေရာသေးပြီးသေးရမယ်နေရာကြီးနေတယ်ဗျ
ဆင်မလိုသွာတယ်ဆိုရင်တော့ ရမ်းတမ်းရမ်းတမ်းနေမှာ နှာမောင်းပြောပါတယ်
လူကဆင်အနံ့ နံတယ်ဆိုတော့ သိပ်မနှိပ်ဘူး
ယောက်ျားတွေ တိမ်ညွတ်တယ်ဆိုတော်သေး လင်ငယ်နေမှအခက်ပဲ…။။။
မီးမီးသော် က ဦးနှောက်စားအောင်လုပ်သွားတယ်
ငါရည်းစားကို မနက်ကျ ပန်ခြံထဲခေါ်သွားပြီး
ဒီပို့စ်က တစ်ချက်ချက်နဲ့ ငြိလို့တော့ အပြတ်ပဲမှတ်..။။။။။
ဝမ်းဗိုက်ကြီး၏ ( ပူခြင်းမဟုတ် )
…….xxxxx … အံဖွယ်သရဲ အလွန်ကြီး၏ :D :D :D
ကိုဘီလူးကြီးရေ လိင်တူချစ်သူ ကြီးပြောပေးနေတော့ရှင်းရောပေါ့နော့။ဟိ သူများစစ်ကူတောင်းရတာပျော်တယ်လေ။
ဟိန္ဒူဘာသာရေးအခြေခံစိတ်ထားတဲ့.. အိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှု အခြေခံပြီး.. ကာလီဒါသလို.. လောကနိတိဆရာလို..ပညာယှိတွေက.. မဟာရာဂျာကြီးတွေ.. ဘုရင်တွေအကြိုက်.. ကိုယ့်စိတ်နဲ့နှိုင်း.. ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ မိန်းမကြည့်..ကျဉ်းမြောင်းတဲ့အမြင်နဲ့..ရေးထားတာတွေပါ..။
ခေတ်နဲ့မလျှော်ညီတော့တာတွေဖြစ်ပြီး.. “အဲဒီခေတ်က ..အဲဒီလိုဖြစ်ကြသကိုး”လို့.. မှတ်ချက်ပေးရန်သာရှိကြောင်း…။
တကယ်တော့.. ကိုယ်ကြိုက်တဲ့မိန်းမက.. မိန်းမကောင်း..မိန်းမမြတ်ဖြစ်ကြောင်း….။
လည်ပင်းသုံးရစ်တော့မသိဘူး လက်မောင်းမှာသုံးရစ်ရှိရင်တော့ တပ်ကြပ်ကြီးအဆင့်ပဲ…။ လဝကဦးစီးဌာန စာရေးမတွေဆို အားလုံးသုံးရစ်…။
မီးမီးသော်ရေ ……ရွာသားတွေကအစ အနောက်ကြမ်းကြတယ်နော့်
ကျွန်တော်လဲ အားကျမခံ ဝင်ပြောမယ်။မိန်းမယူမယ့် အရေး လိုက်လျှာနဲ့ လျက်ရတော့မယ်ပေါ့။အင်းတိတ်ကြီး…..
ဟဲဟဲ ကျွန်တော်ကတော့ အရင်းတုတ်၍အဖျားရှုး၏။
ဒီခေတ်ကတော့ အဲဒါတွေနဲ့ လိုက်ရွေးနေရင် မှားမယ်နော်….လို့ပဲပြောချင်တယ်….
မကြိုက်တဲ့အရာတွေဆို အကုန်ပြင်နေကျတာလေ မလှလှအောင်ပြင်နေကြတာ…….
ကိုရီးယားမ တွေလှမှာပေါ့။ဝက်နှာခေါင်းတွေကို ကြည့်ကောင်းအောင်ခွဲစိတ်ထားတာ။